Xiddiga Musaaricada John Cena Oo Muddo Dheer Garoomada Ka Maqnaan Doona Iyo Dalka Sucuudiga Oo Sugaya Soo Laabashadiisa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xiddiga Musaaricada John Cena Oo Muddo Dheer Garoomada Ka Maqnaan Doona Iyo Dalka Sucuudiga Oo Sugaya Soo Laabashadiisa
(16-10-2018) Halyeyga 16-ka jeer ku guuleystay Champions-ka ciyaaraha legdinta WWE ee Musaaricada, John Cena ayaa muddo dheer ka maqnaan doona garoomada, kaddib markii soo bandhigay isbeddel muuqaal oo ku yimid jidhkiisa.
John Cena ayaa kasoo muuqday shaashadaha isaga oo timo dheer lla baxay oo jidhkiisuna isku daatay, waxaana si ba’an loogu jarjaray baraha bulshada markii uu ka qayb-galay feedhka legdinta WWE Super Show-Down oo ka dhacay magaallada Melbourne ee waddanka Australia, isaga oo uu wehelinayo Bobby Lashley ayna guul-darro u geysteen Elias iyo Kevin Owens.
Cena oo ka jawaabayay sababta keentay in barta Twitterka lagaga falceliyo muuqaalkiisa iyo isbeddelka ku dhacay, ayaa tibaaxay in aanu beryahan iman doonin garoomada oo uu maqnaan doono, waxaanu faahfaahiyey sababta uu timaha ula baxay.
“Waxa aan timaha u bixisanayaa film aan ku metelayo waddanka China” Ayuu yidhi.
Waxa uu tilmaamay in uu baraha Internet-ka ku arkay sida looga falceliyey muuqaalkiisa, hase yeeshee ay ka cadhaysiisay, isla markaana uu arkay in qof walba uu neceb yahay marka uu timaha la baxo.
Cena oo ay da’diisu tahay 42 jir ma jari doono timihiisa muddo laba bilood ah, sababtoo ah waxa muddadaas soconaya filimka uu metelayo.
“Sababtaas darteed, waan la baxayaa timaha, waxaanan jari doonaa marka uu filimku dhamaado. Weli waxa iiga hadhsan laba bilood.” ayuu yidhi.
John Cena ayaa muddada uu filimkaasi socdo aan iman doonin garoomada, kulanka ugu soo horreeya ee la filayo inuu ciyaarana waxa uu ka dhici doonaa dalka Saudi Arabia bisha November ee soo socota dhexdeeda, waana ciyaar qaali ah oo luul ay kala qaadi doonaan.